Soavaly Mustang, ny taranaky ny espaniola | Soavaly Noti
Mustang na Mustangs dia ny soavaly amerikana avaratra. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany ary iray amin'ireo tandindon'i Etazonia, fa ... Fantatrao ve fa Espaniola ny niandohany?
Raha mamakafaka ny teny amin'ny fitsipi-pitenenana isika "Mustang" hitanay izany avy mivantana amin'ny teny Castilian "mustang" izay midika mamaritra ny Soavaly Mesteño any an'ala ary tsy misy tompony. Ireo soavaly ireo, tamin'ny Castile tamin'ny taonjato XIII, dia an'ny olona nahavita nisambotra azy ireo.
Amin'ny faran'ny Pleistocene lany tamingana ny amerikanaNa izany aza, nandritra ny fandresena an'i Amerika, ny Espaniola mpandresy dia namerina namerina an'io biby kanto io. Ny sasany tamin'ireo soavaly ireo dia nanjary maroons (biby afa-mandositra na very izay namaky tamin'ny bibidia) ary niely nanerana ny kaontinanta izy ireo tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny lemaka amerikana midadasika sy ny tsy fisian'ireo mpihaza voajanahary dia nanampy tamin'ny fanitarana azy haingana.
Iza ary ireo razambenao? Ny Espaniola, ny Arabo na ny Hispano-Arabo dia nanjary razambe hatrizay. Na izany aza, ny sasany amin'ireo fandalinana ADN tato ho ato, notontosain'ny University of Córdoba sy ny mpiara-miasa aminy any Etazonia, manamafy izy ireo fa ny soavaly amerikana Mustang dia avy amin'ny Marsh Horses avy amin'ny tontolo voajanahary ao Doñana.
Misy angano iray milaza fa i Christopher Columbus, izay te hampiasa soavaly espaniola-arabo amin'ny fandresena ny Tontolo Vaovao, dia nomena ny takalon'ny soavaly sasany natsangana teo akaikin'i Seville.
Androany, atahorana ho lany tamingana ny MustangNa dia eo aza ny fiahiahiana ny tontolo iainana sy ny zavaboary monina ao aminy dia mahatonga antsika hanana lafy tsara amin'ity olana ity. Na izany aza, marina fa na eo aza ny fiarovana azy sy ny marika amerikanina dia mitotongana hatrany ny isan'ny soavaly mustang. Ny filàna kijana fiandrasana omby dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ireto zanaky ny soavaly notarihin'ireo mpandresy Espaniola ireto, hanohy hazaza any amin'ny toerana maro any Etazonia.
1 Tahaka ny ahoana ilay soavaly Mustang?
Tahaka ny ahoana ilay soavaly Mustang?
Soavaly Mustang ankehitriny dia santionany somary voafintina sy matanjaka izay manana haavo eo anelanelan'ny 135 cm ka hatramin'ny 155 cm. Kely koa ny lohany sy ny hatony, mifanaraka amin'ny refin'ny vatany. Na dia tsy soavaly lehibe aza izy ireo dia manana hery sy fiaretana toy izany ka afaka mihazakazaka an-kilaometatra maro nefa tsy mandreraka.
Tena karazany mafy orina izy io izay mahalala ny fomba hidiran'ny zava-tsarotra ary haharitra amin'ny lemaka sy ny kijana, mihinana zavamaniry maintso sy kirihitra ary tsy mila misotro rano be. Niaritra toetr'andro ratsy izy ireo, nanomboka tamin'ny ririnina mangatsiaka ka hatramin'ny fahavaratra mamirifiry. Misongadina i Mustags ny fitombenany sy ny fahaizany mampifanaraka de mamela azy ireo hiaina tsy amin'ny lemaka lehibe fotsiny fa amin'ny karazana faritra amerikana rehetra, manomboka amin'ny tany karankaina ka hatrany amin'ny tendrombohitra be indrindra.
Ny endrik'izy ireo mazàna dia somary tsy raharahaina sy marevaka, zavatra manome azy ireo hatsaran-tarehy miavaka. Ny palitao dia afaka miovaova be, mahita karazana tonality ary na dia palitao pinto sy mottled aza. Na dia, ny soavaly Mustang aza dia afaka mampiseho karazana palitao manokana kokoa: fifangaroana volontsôkôla misy loko manga manome azy hamirapiratra manokana.
Saika tsy manam-pahaizana sy manam-pahaizana be, ity karazana Equine ity dia manana toetra tsy miova sy mahaleo tena tanteraka. izay nanampy anao ho tafavoaka velona amin'ny toe-javatra sarotra. Izy ireo dia biby mampiahiahy, zavatra iray tena ilaina amin'ny fiveloman'izy ireo manokana sy an'ny an'ny omby.
Ara-dalàna ho raisina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany, sa tsy izany?
Araka ny efa nambaranay tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra, Mustangs, soavaly amerikana avaratra fanta-daza, dia tsy avy amin'ity firenena ity. Na izany aza, misy ny firaketana ny fitoviana izay nonina ny tanin'i Amerika Avaratra an'arivony taona maro lasa izay, na dia tsy mbola manana taranany aza izy ireo ankehitriny. Ny soavaly niainga tany Amerika Avaratra, dia lany tamingana indraindray alohan'ny faran'ny Pleistocene, izany hoe, maherin'ny 12.000 taona lasa izay. Taonjato vitsivitsy taty aoriana Tamin'ny 1492, tonga teto amin'ity tontolo vaovao ity nitaingina soavaly ny Espaniola mpandresy, ary vetivety dia nonenan'ireo soavaly ireo tany ireo.
Ireo soavaly voalohany antsoina hoe soavaly Mustang dia taranak'ireo Espaniola ireo izay tonga taona maro lasa izay teny amin'ny morontsirak'i Florida sy Mexico. Ny sasany avy amin'ny soavaly arabo, ny sasany avy amin'ny rafi-pitondrana Andalosiana, na toy ny fanaporofoan'ny fandinihana ADN farany teo, avy amin'ny Caballo de las Marismas. Ireo soavaly ireo lasa maroons izy ireo, niely nanerana ny lemaka sy ny kijana, nampitombo haingana ny isan'ny olona.
Vitsy tamin'ireo biby ireo no azon'i Amerikanina tera-tany, que hain'izy ireo ny mahita ny tanjaka sy fanoherana an'izany nanao an'io biby io ho fitaovana fitaterana tsara indrindra nefa koa nahatonga azy ireo ho mety amin'ny lahasa maro isan-karazany. Nanjary mpiara-miasa aminy koa ny soavaly izay nankasitrahany fatratra ka nanolo ny alika ho biby mpiara-mitory.
Amin'ireo andiana bibidia marobe izay nipoitra dia tsy maintsy ampiana fampitomboana ireo soavaly navotsotry ny tompony, toy ireo mpiompy izay namoaka azy ireo hitady sakafo mandritra ny ririnina ary tsy mila mitazona izany.
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ny mpiompy amerikana dia nihevitra fa be loatra ny soavaly dia ary izany, nanampy trotraka ny fitomboan'ny omby, dia nanimba ny sakafon'ny bibiny. Nanomboka nihaza azy ireo àry izy ireo. Nihena tsikelikely ny isan'ireo soavaly Mustang any Amerika Avaratra mandra-pahatongany nihaza azy ireo, ka nanjary tandindomin-doza ilay karazana tamin'ny faran'ny taona enimpolo. Izany indrindra tamin'ny fitopololahy rehefa Tao amin'ny Kongresin'i Etazonia, nisy lalàna iray namoaka lalàna izay mandrara tanteraka ny fihazana mpitaingina zaridaina ary nilaza azy ireo ho karazana voaaro. Noho io lalàna io dia nijanona tsy nihena be intsony ny isan'ireo Mustang.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-30.000 dia nisy XNUMX teo ho eo Soavaly Mustang any Amerika Avaratra sy ny manam-pahaizana dia nanombana fa hihena ho 10.000 ity isa ity. Nanaitra ny Amerikanina nanomboka namorona tetikasa toa ny "Adopt soavaly" tamin'ny 1973 tao Montana, izay ezahana hialana amin'ny fihazana na fanaovana sorona ataon'ireny zavaboary mahatalanjona ireny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly mustang
TENA TAHAKA NY soavaly aho ary ity fampahalalana rehetra ity dia nanompo ahy be dia be, amin'ity QUARANTINE ity dia hitady ny fampahalalana rehetra momba ny soavaly ato amin'ity pejy ity. :)